ko htike's prosaic collection: မြန်မာ့ရှေ့ရေး ရင်လေးစရာနှင့် နအဖ၏ လုပ်ရပ်များ
မြန်မာ့ရှေ့ရေး ရင်လေးစရာနှင့် နအဖ၏ လုပ်ရပ်များ
မုန်တိုင်းကြောင့် လူမြောက်များစွာ သေဆုံးခဲ့ရသော်လည်း နအဖ၏ လုပ်ရပ်များမှာ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် ကူညီနေတာထက် တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်နေခြင်းသာဖြစ်နေသည်ဟု သံသယ ဖြစ်စရာတွေ တွေ့လာရပါသည်။
တိုင်းပြည်အတွက် အဓိက ချက်ချင်း လိုအပ်နေသည်မှာ ...
၃။ သေဆုံးသွားသူများအား ကောင်းမွန်စွာ မြှုပ်နှံနိုင်ရန်
၅။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု
အထက်ပါ ရေတို လုပ်ငန်းများကို ထိထိရောက်ရောက်နှင့် ရက်ပိုင်းအတွင်း မလုပ်နိုင်ပါက မြို့ပျက်များကဲ့သို့ ပျင်စီးသွားနိုင်ပြီး၊ ဒုစရိုက်မှု လုယက်မှုများဖြင့် ပြဿနာများစွာ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကူးဆက်ရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ပြီး ထိုရောဂါများကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုများကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ အခြားလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သော ရေရှည် လုပ်ငန်းများလည်း ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် လက်ရှိ အာဏာရယူထားသော နအဖက ဘာတွေ တာဝန်ယူလုပ်နေသပါသလဲ။
UN မှ ကူညီမည်ဟု ဆိုသော ကမ်းလှမ်းချက်ကို မုန်တိုင်းအပြီး ၂ ရက်မြောက်မှ လက်ခံခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးကို အကြောင်းပြချက်မပေးဘဲ ဒီနေ့ ပိတ်ထားလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ NGO မှ ကူညီရန် visa လျှောက်၍ မရ ဖြစ်နေကြသည်။
UN နှင့် နိုင်ငံတကာမှ ကူညီသော ပစ္စည်းများကို သူတို့၏ နာမည်များတပ်၍ ဒုက္ခသည်များကို သူတို့ ကူညီသယောင်ပြုကာ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်နေကြသည်။
ကဲ ... ညီ အစ်ကို တို့၊ ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီ ဘလော့ကို လာဖတ်နေသော စာဖတ်သူ .. သင် .. သည် အခြေအနေ အလွန်ကောင်းနေသူ ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် နအဖက လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေသော်လည်း ဒုက္ခရောက်နေသော ကျွန်တော်တို့ သွေးချင်း မောင်နှမများ၏ ဒုက္ခများအတွက် .... သင် .... ဘာလုပ်ပေးနိုင်ပါသလဲ။
တစ်ခုခုကို တတ်နိုင်သမျှ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးဖို့ မြန်မာပြည်သူတွေ ကိုယ်စား ကျွန်တော် မေတ္တာရပ်ခံပါသည် ခင်ဗျာ။
ငွေကြေးအားဖြင့် ကူညီနေသူများကိုလည်း အထူးမေတ္တာရပ်ခံလိုသည်မှာ တစ်ကြိမ်သာလှူသော အလှူမျိုး မဟုတ်ပဲ နောင်တွင် ဆက်လက် ကူညီပေးနေရဦးမည် ဆိုတာကို သတိရှိပြီး တတ်နိုင်သမျှ လစဉ် လှူဒါန်းမှုများကို ပြုလုပ်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
In Canada, there areafew groups who collect some donations.
We will do our best here.
7 May 2008 at 03:00